HETSIKA FAMPIRAISANA KRISTIANA HO AN’NY FIRENENA: Miantso ny olompirenena rehetra hitondra fiovana | Madatopinfo
HETSIKA FAMPIRAISANA KRISTIANA HO AN’NY FIRENENA: Miantso ny olompirenena rehetra hitondra fiovana
Noho ny fahatsapana fa marary i Madagasikara, mijaly ny vahoaka ao aminy dia nifoha, nijoro ny kristiana ka nanangany ny fikambanana Hetsika Fampiraisana Kristiana ho an’ny Firenena (HFKF). Niorina ara-panjakana tamin’ny 19 Aprily lasa teo ity fikambanana ity ary nampahafantarina tamin’ny fomba ofisialy androany 7 May tetsy Antaninarenina. Ny tanjon’ny HFKF ny hanabe, hanentana, hanabe ary haniraka ny kristiana ka hijoro ho vavolombelon’Andriamanitra eo amin’ny sehatry ny fiaraha-monina misy azy sy ny firenena. Isan’ny laharampahamehan’ny fikambanana ihany koa ny hametraka rafitra ahafahan’ny kristiana mihaona, mifampizara, mifanampy, mifanohana eny amin’ny sokajim-piaraha-monina rehetra misy azy, ka miseho amin’ny maha-kristiana sy mitondra soatoavina kristiana.
“Miantso ny krisitiana rehetra tsy ankanavaka ny HFKF hitondra fanovana. Tsy mifidy antokom-pinoana, fa kristiana izay mahatsiaro tena fa mila mandray andraikitra. Izahay mijoro izao, sady tsy mpanohitra no tsy mpanohana fanjakana fa mijoro amin’ny mahakristiana anay, hitondra ny eritreritra sy toetra an’Andriamanitra eto amin’ny firenena. Vina lavitr’ezaka no apetrakaky ny HFKF”, hoy i Pastera Rasamimanana Rodin, mpikambana ao amin’ny HFKF.
Ao anatin’ny ezaka goavana hotratrarin’ity fikambanana vaovao ity ny ho fampiraisana ny samy kristiana sy fanohanana ny Fiangonana amin’ny adidy isan-karazany na eo amin’ny fiaraha-monina izany, na eo amin’ny firenena. Arak any famelabelaran-kevitra nataon’izy ireo omaly nandritra ny fampahafantarana ny HFKF, dia misy ny atao hoe: “Tendrombohitra fito mifehy ny fiaraha-monina”, izay tena antom-pijoroan’ny fikambanana”. Ny fianakaviana, ny fanabeazana, ny zava-kanto, ny serasera, ny toa-karena, ny fitondrana ary ny fivavahana, ka tao anatin’ireo tsirairay avy no namoahana ireo lesoka, vina, tanjona ary asan’ny tendrombohitra tsirairay. Izy ireo izay entina hanazavana ny sain’ny olona tsirairay avy mba tsy ho voarebirebin’ny mpanao politika sy mba tsy hanaovana fitaovana politika ny olona.